Lionel Messi Oo Si Layaableh U Cadeeyay In Aanu Madax Waynihiisa Josep Maria Bartomeu La Hadal Wixii Ka Danbeeyay Guuldaradii Liverpool-Miyuu Sabab Isagu U Ahaa Joogitaanka Valverde? - Gool24.Net
Lionel Messi Oo Si Layaableh U Cadeeyay In Aanu Madax Waynihiisa Josep Maria Bartomeu La Hadal Wixii Ka Danbeeyay Guuldaradii Liverpool-Miyuu Sabab Isagu U Ahaa Joogitaanka Valverde?
Kabtanka kooxda Barcelona ee Lionel Messi ayaa shaaciyay in aanu hal mar la hadal madax waynaha kooxdiisa ee Josep Maria Bartomeu tan iyo ceebtii ay kala soo laabteen kulankii Anfield ee tartanka Champions League looga reebay.
Waxa kale oo uu Lionel Messi meesha ka saaray in uu isagu sabab u ahaa in Ernesto Valverde aan laga caydhin shaqada Barcelona taas oo ay in badan warbaahintu daabacday markii uu Josep Maria Bartomeu go’aanka ku gaadhay in Valverde uu kooxda sii joogo.
Laakiin Lionel Messi ayaa ku dooday in ayna jirin dhibaato u dhexaysa isaga iyo Josep Maria Bartomeu inkasta oo uu qiray in aanu tan iyo dhamaadkii xili ciyaareedkii la soo dhaafay kadib la hadal.
Dhinaca kale Lionel Messi ayaa cadeeyay in guuldarooyinkii Roma iyo Liverpool ee isku eekaa in aanu Valverde sabab u ahayn oo ay iyagu ka ciyaartoy ahaan qaladka lahaayeen.
Ugu horayn Lionel Messi oo qiraya in guuldaradii Liverpool ka soo gaadhay ay iyagu ka ciyaartoy ahaan masuul ka ahaayeen ayaa yidhi: “Guuldaradii kulankii Liverpool khaladkayaga ayay ahayd, wixii kulankaas anaga nagu dhacay ma aha wax dhici kara, naftayada ayaanu daboolnay”.
“Wixii Rome ayaa nagu dhacay anaga, sababta ay u dhacday wax tababaraha ah may ahayn, laakiin go’aankayga may ahayn in isagu uu sii joogay sidii meelo kale laga sheegay” ayuu Messi hadalkiisa raaciyay.
Messi oo ka hadlaya in uu niyadjabsanaan doono haddii aanu xili ciyaareedkan ku guulaysan Champions League ayaa yidhi: “Anagu waan niyadjabsanaan doonaa haddii aan sanad kale ku qaato la’aanta Champions League”.
Lionel Messi ayaa kadib xaqiijiyay in aanu madax wayne Josep Maria Bartomeu la hadal wixii ka danbeeyay guuldaradii Liverpool wuxuuna yidhi: “Anigu madax waynaha lamaan hadal tan iyo wixii ka danbeeyay cidhibtirkii Liverpool, kaas ayaa ahaa waqtigii ugu danbeeyay”.
Laakiin Messi ayaa xusay in ayna xumaani ka dhexayn Bartomeu wuxuuna yidhi: “Anigu dhibaato kuma qabo madax waynaha, wax walba way fiican yihiin, maanu kulan sababtoo ah may ahayn waqtigeedii”.
“Marka aanu isragno ee uu midba kaayaga kale aaminsan yahay, ee ay waajibka tahay in aanu wada hadalno, waanu samaynaa, wax dhibaato ahni ma jirto”.
Warbaahinta Spain ayaa hore u shaaciyay in Lionel Messi iyo xidigaha muhiimka ah ee Barca ay Josep Maria Bartomeu ugu cadhaysan yihiin qaabkii aan adkayn ee uu Neymar Jr wada xaajoodkiisa ugu jiray maadaama oo ay doonayeen in xidiga reer Brazil la soo celiyo.